အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေပြောင်းဖူးနဲ့ ရေထဲကကြာစွယ်
24 Responses to “ရေပြောင်းဖူးနဲ့ ရေထဲကကြာစွယ်”
အကုန်ကြိုက်လို့အကုန်စားသွားတာ် မချော..
ရေပြောင်းဖူး .. !!
ဟို စားနေကျ ပြောင်းဖူး မဟုတ်ဘူးးကိုးး..
စားကြည့်ဖူးချင်တယ် ..း))
ပိတ်စွယ်က ဟင်းခါးချက်တဲ့နေရာမှာ သုံးကြတာပါ၊ သေးသေးဖြူဖြူလေးပါ၊ ကြာစွယ်နဲ့မတူပါဘူး။
ရေပြောင်းဖူးကို သုပ်မစားဘူးဘူး။ သူ့ အရသာကြိုက်တော့သုပ်စားလည်းကြိုက်မှာသေချာတယ်။
ရေပြောင်းဖူးကတော့ မြင်လဲမမြင်ဖူး စားလဲမစားဖူးဘူးချောရေ.. စိတ်ဝင်စားတယ်။ အရသာက ဘယ်လိုနေလဲဟင်။ မျှစ်နဲ့တူလား။ ပုံစံလေးကြည့်ရတာတော့ မျှစ်ဆတ်(မျှစ်အစိမ်း)ကလေးတွေနဲ့ တူသလိုပဲနော်။ ကြာရိုးတွေ ကြာစွယ်တွေ ကြာမြစ်တွေကတော့ ဒီမှာပေါတယ်။ အစုံလဲရတယ်။
တီတင့်လည်းဂျက်နဲ့တူတူပဲ ဒီလိုအချိန်မှာ ချဉ် ငံ စပ်
မလေးပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မနက်ဖြန်တော့ အိမ်ကို
ကြာဇံချက် ချက်ခိုင်းထားတယ်း)
ရေပြောင်းဖူးကို တစ်အားကြိုက်တာ.. တောင်ကြီးပြန်ရင်ဆို နေ့တိုင်းနီးပါးလောက်ကို စားတာ.. ရေပြောင်းဖူးသုပ်လေး စားချင်လိုက်တာနော်~~~
မရောက်တာကြာလို့ လာလည်ရင်း အကုန်တီးသွားတယ်နော်..ဟိ
''ဗိုက်ဆာတယ် ဘာစားရမလဲ'' စဉ်းစားနေတုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတော့ ''စားချင်တယ် စားချင်တယ်''ဖြစ်သွားရော..တော်ဘီ တော်ဘီ ပြန်တော့မယ်...နောက်နေ့မှ တိုဟူးပျော့ ခေါပုတ် နဲ့ လုပ်စားမယ် ..D;
မစားဖူးလို့ စားကြည့်ချင်တယ် မမ :):)
စားချင်လိုက်တာနော်... ရှလွတ် ရှလွတ် :)
ရေပြောင်းဖူး တစ်ခါမှမစားဖူးဘူး စားချင်လိုက်တာ...
ပြန်စဉ်းစားကြည့် သလောက်တော့ ရေပြောင်းဖူးရော၊ ကြာစွယ်ရော မစားဖူးသေးဘူး ထင်တာပဲဗျ..၊ အထူးသဖြင့် ရေပြောင်းဖူးကို စိတ်ဝင်စားတယ် မချော..။
ရေပြောင်းဖူး ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးလို့ လာကြည့်တာပါ.. စားချင်စရာပဲ.. :)
မချောတို့ကတော့ ခရီးထွက်တာတောင် ပို့စ်တွေကို အော်တိုတင်ခဲ့ပြီး အစားနဲ့ နေ၀သန့်ကို နှိပ်စက်တော့တာကိုး.. ဟီးဟီး.. သွားရည်တမြှားမြှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တနားထှာ..
ရေပြောင်းဖူးကို မြင်ဖူးတယ် ဘာလုပ်စားရမှန်းမသိတာ။ ရေပြောင်းဖူးကို စားကြည်.ချင်တယ်။ နည်းပေးတာ ကျေးဇူး မမမချော။ နောင်ကြုံရင်လုပ်စားကြည်.ဦးမယ်။ :)
သရေတပြင်ပြင်နဲ့ စားချင်သွားတယ်ဗျာ။။ ငတ်နေတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဘာပဲတွေ့တွေ့ စားချင်နေတယ်..ဟီးး။။
အဲ့ဒီကြာစွယ်ကို မြေးအိုးမြီးရှည်စားတိုင်း ပိုထည့်ခိုင်းတယ်။ စိမ့်နေတာပဲနော်။ လုပ်စားကြည့်ဦးမှ ချောရေ...။
ရေပြောင်းဖူးသုတ်လဲ စားဘူးတယ်။ ဆိုင်မှာ။ ရေပြောင်းက ဒီမှာ ဈေးကြီးတယ်။ သံဈေးမှာမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရတယ်။ အလုပ်ရှုပ်မခံပါဘူး..ဆိုင်မှာ ၀ယ်စားလိုက်တယ်..မကောင်းဘူးလား..:)